I-WestJet Group imemezela uMongameli omusha wesikhashana kanye ne-CEO
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-WestJet Group imemezela uMongameli omusha wesikhashana kanye ne-CEO
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICanada Breaking News • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba
UHarry Taylor uthatha ngokusemthethweni indima kaMongameli wesikhashana weWestJet Group
U-Harry Taylor wahola udaba lokuqala lwebhondi yase-WestJet yase-US, waxoxisana ngokuthengwa kwendiza i-Boeing 787 Dreamliner ne-Boeing MAX, futhi waba nesandla ekuthengisweni kwe-WestJet kwa-Onex.
I-WestJet Group namuhla imemezele ukuthi uHarry Taylor usethathe ngokusemthethweni indima yokuba nguMongameli wesikhashana kanye neChief Executive Officer (CEO).
The I-WestJet iqembu limemezele u-Taylor njengoMongameli wesikhashana kanye ne-CEO ngoSepthemba 15, 2021, kulandela izindaba zokuthatha umhlalaphansi kuka-Ed Sims okumenyezelwe ngoJuni 9, 2021.
“Ngizizwa ngihloniphekile ngokuthatha indima yesikhashana yokuba yi-CEO kulesi sikhathi esibalulekile e-WestJet Group, futhi ngigxile ekuzibophezeleni kwethu ngokuqhubekayo kwezokuphepha ngaphezu kwakho konke kuyilapho siqinisekisa ukuqhubeka kokululama kwethu, njengoba sakhela kabusha izivakashi zethu izindiza zethu kanye nabantu bethu. ,” kusho uHarry Taylor, uMongameli wesikhashana kanye ne-CEO.
“Ekupheleni konyaka, sizobuyisela wonke umkhumbi wethu ukuze sisebenze ngesikhathi samaholide esihamba phambili, sixhumanise esibathandayo futhi sifeze izinhlelo zamaholide ezilindelwe isikhathi eside. Ngibheke ngabomvu ukuhola inhlangano yethu kulesi sigaba esibalulekile sokululama kwethu, kuyilapho sisaqhubeka nokuthungatha i-CEO yaphakade.”
"Ngijabule kakhulu ukuthi uHarry uvumile ukuthatha lesi sikhundla sesikhashana," kusho isitatimende I-WestJet USihlalo Webhodi Leqembu uChris Burley. "Ukufuna kwethu i-CEO emhlabeni wonke kuyaqhubeka, futhi egameni le-WestJet kanye nebhodi, sibonga ukuthi uHarry uye wasukuma ukuze asisize kulolu shintsho olubucayi."
UHarry Taylor wajoyina I-WestJet ngowezi-2015 njengePhini likaMongameli Omkhulu kanye noMphathi Omkhulu Wezezimali (i-CFO). Ngalesi sikhathi, wahola inkampani yezindiza odabeni lokuqala lwebhondi yase-US, waxoxisana ngokuthengwa kwendiza i-Boeing 787 Dreamliner ne-Boeing MAX, futhi waba nesandla ekuthengisweni kwe-WestJet kwa-Onex. Ngalolu bhubhane, uHarry wahola ithimba lezezimali ekuphatheni imali ye-WestJet ukuqinisekisa ukusimama ngaphandle kwemali engenayo engenayo.
“Ngifuna ukubonga u-Ed ngamagalelo akhe ezinhlelweni ze-WestJet kanye nezinhlelo zokukhula kule minyaka emine edlule,” kusho uChris Burley, uSihlalo webhodi labaqondisi be-WestJet. “U-Ed uhole iWestJet enkingeni embi kakhulu emlandweni wezokundiza futhi uzosigcina kuze kube sekupheleni kuka-2021. Sikweleta amandla ethu alinganiselwe nokuzinza okungatheni kubuholi buka-Ed kanye nesandla esiqinile. Ngokomuntu siqu, siyajabula ngokuthi u-Ed uzokwazi ukuphinde ahlanganyele nomndeni wakhe E-New Zealand ekupheleni konyaka.”